Caalamka, 01 April 2019
Xisbiga Erdogan oo guul-darrooyin la kulmay
Xisbiga madaxweyne Erdogan ee AKP ayaa guul-darrooyin xooggan ay ka gaareen doorashooyinka dowldaha hoose ee dalkaas, ayada oo looga adkaaday magaalooyinka waa weyn ee dalka.
Shareecada Islaamka oo laga dhaqa-gelinayo Brunei
QM ayaa maanta cambaareysay sharciga Islaamiga ah ee ku dhaqankiisa uu toddobaadkan ka hir-galayo dalka Brunei, kaasi oo ay ku qeexday “mid arxan darro ah, oo ka baxsan bani’aadannimada.”
Turkiga oo iska diiday cadaadiska Mareykanka
Dowladda Turkiga ayaa maanta diiday cadaadiska Mareykanka ee ku wajahan heshiiska ay ku iibsaneyso habka difaaca gantaalaha Ruushka, waxayna sheegtay in Ankara ay ku guda jirto wada-hadla lagu soo gaarsiinayo habkan oo lagu magacaabo S-400.
Quebec, Canada oo Xijaabka laga Mamnuucayo
Gantaallo lagu weeraray Israel iyo jawaab ay bixisay
Kooxaha wax iska caabinta Falastiin ayaa xalay saddex gantaal ku weeraray Israel, taasi oo dhlisay in ciidamada Israel ay duqeymo ku jawaabaan, halisna gelisay xabad joojin ay ku dhowaaqday kooxda Xamas.
Duqeyn loo geystay isbitaal ku yaalla Yemen
Ugu yaraan 7 qof oo ay afar ka mid ahi carruur yihiin ayaa la xaqiijiyay in ay dhinteen, kaddib marki uu gantaal ku habsaday isbitaal ay taageerto hey’adda Save the Children dhinaca oo ku yaalla waqooyigalbeed ee dalka Yemen.
Sacuudiga oo ka hor-yimid go'aanka Trump ee Golan Heights
Dowladda Sacuudiga ayaa ka hor-timid go’aanka madaxweyne Donald Trump uu Isniintii dhulka Golan Heights ee Syria ugu aqoonsaday dhul ay leedahay Israel.
Israel oo duqeysay Marinka Gaza
Diyaaradaha dagaalka Israel ayaa maanta duqeyn ka fuliyey Marinka Gaza, halka milatariga Israel ay sheegeen in weli ay socdaan gantaallada laga soo tuurayo dhulka Falastiiniyiinta.
Gantaal ku dhacay Tel Aviv oo dhaawacay 7 qof
Ciidamada Israel ayaa kooxda Xamas ku eedeeyey inay soo ridday gantaal ku dhacay guri ku yaalla waqooyiga magaalada Tel Aviv, kaasi oo dhaawacay 7 qof, waxayna ku dhowaaqeen inay ciidamo xoojin ah u dirayaan hareeraha Gaza.